အလုပ်မှာ ပို. ပို. အရည်အချင်းဖြစ်လာလုပ်နည်း
Posted by ကို Tranquillus | ဇွန်လ 13, 2018 | ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
စက်ရုံအလုပ်ရုံများတွင်အလုပ်ဆုံးရှုံးမှုသူတို့ကိုယ်သူတို့ထင်ရှားလာသောအခါအလုပ်လောကီသားတို့သည်အစဉ်မပြတ်ပင် 90 နှစ်ပေါင်းကနေပြောင်းလဲနေပါတယ်။
အဆိုပါဝန်ထမ်းကယ့်ကိုအခြား post ကိုများအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်များရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
ကသစ်ကိုကျွမ်းကျင်မှုဆည်းပူးရန်လိုအပ်သောဖြစ်လာခဲ့သည်ဒါထိုအခါတစ်သက်တာအလုပ်အကိုင်ပျောက်ကွယ်သွားပြီ, ဒါပေမယ့်လည်းမှန်မှန်ကျနော်တို့ပြီးသားရှိသူတို့အားကို update ။
ဤသည်ကိုလည်း "လုပ်ငန်းခွင်" ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်ကားအဘယ်သို့ဒီမှာအလုပ်3ခြေလှမ်းများမှာ ပို. ပို. အရည်အချင်းဖြစ်လာဖို့ဘယ်လိုပါပဲ။
အလုပ်မှာ ပို. ပို. အရည်အချင်းဖြစ်လာသည်မိမိလေ့လာမှုများ၏ခြေချင်းထဲကအဓိကအားဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ရေး, ထွက်ရှိသောတိုင်း 1 သို့မဟုတ်2နှစ်ပေါင်းလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်ပါပဲ။
ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့ DIF စဉ်းစား (လေ့ကျင့်ရေးမှတစ်ဦးချင်းညာ) သင်တို့ကိုသင်အမှန်တကယ်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ဧရိယာ၌လေ့ကငျြ့ပေးကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်နှင့်သင့်အချိန်ဇယားကိုသင်ခွင့်ပြုလျှင်သင်သည်လည်း MBA ဘွဲ့အပေါ်စတင်နိုင်ပါတယ်။
ဤရွေ့ကား High-end သင်တန်းများပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်ကွန်ယက်ကိုဆောက်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း accelerators ဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦးကကျွမ်းကျင်မှုအကဲဖြတ် သင်သိပြီး မလုပ်နိုင်တာကို ခွဲခြားသိမြင်ဖို့ ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါ။
သင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ယက်ကိုအပြီးကြည့်ရှုသင်စိတ်ဝင်စားသောကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားဖြစ်ရပ်များကိုသွားနှင့်အနည်းငယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတ်များချော်ဖို့မေ့လျော့တော်မ key ကိုတင်ပါတယ်နှင့်အတူဆွေးနွေးပါ။
တိုတောင်းခုနှစ်, သင်တို့ကို အကြောင်းပြု. လုပ်ပါ။
အလုပ်မှာ ပို. ပို. အရည်အချင်းဖြစ်လာလုပ်နည်း သြဂုတ်လ 23rd, 2018Tranquillus
လွန်ခဲ့သောပြင်သစ်ကျန်းမာရေးစနစ် - အကာအကွယ်၊ စရိတ်၊ အထောက်အပံ့